၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲကို ဥပဒေအရသတ်မှတ်ချိန်မှာပဲ လုပ်မှာလို့ ကော်မရှင်အတည်ပြု အပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းများ
၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲကို ဥပဒေအရသတ်မှတ်ချိန်မှာပဲ လုပ်မှ...
8 ต.ค. 2562 - 10:38 น.
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မယ့် နေရာတွေ၊ မကျင်းပနိုင်မယ့်နေရာအစရှိတာတွေကိုလည်း ၂၀၁၉-၂၀၂၂ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို လုပ်ငန်းစဉ်လိုက် လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကသိရပါတယ်။
၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲကို အခြေခံဥပဒေအရသတ်မှတ်ချိန်ထဲမှာပဲ လုပ်မှာလို့ ကော်မရှင်အတည်ပြု
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ သက်တမ်း ၅နှစ်ကုန်ဆုံးတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်မှာလို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးမြင့်နိုင်က ဘီဘီစီကို အောက်တိုဘာ ၈ ရက်မှာ အတည်ပြုပြောပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၇ရက်နေ့မှာတော့ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရယ်၊ နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့နဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးဆိုင်ရာအချက်တွေအပြင်၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၂ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို လုပ်ငန်းစဉ်လိုက် လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်တွေအဖြစ် ဥပဒေနဲ့အညီလွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ အများယုံကြည်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်မှု၊ ပွင်းလင်းမြင်သာမှုနဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ ဆန္ဒအမှန်ကို ထုတ်ဖော်ပေးမှု စတဲ့အချက်တွေနဲ့ ကျင်းပပေးနိုင်ဖို့လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
နောက်လွှတ်တော်သက်တမ်းတခုအတွက် မဲဆန္ဒနယ်တွေကို လွှတ်တော်သက်တမ်းမကုန်မီ ၂လအလိုမှာ ပြည်ထောင် စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးရမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ တွေမှာ ပြဌာန်းထား ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ လတ်တလော စဉ်းစားထားတာရှိပေမယ့် ဥပဒေအရပါရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ လုံခြုံရေးကို အာမခံ နိုင်တဲ့နေရာတွမှာ ကျင်းပဖို့ဆိုတာကိုလည်း ဥပဒေအရပြဌာန်းပါရှိတယ်လို့လည်း ဦးမြင့်နိုင်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
၂၀၁၅ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ နိုင်ငံအတွင်း လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ နေရာအနည်းငယ်သာ ရွေးကောက်ပွဲကို မကျင်းပ ခဲ့ပေမယ့်၊ လာမယ့် ၂၀၂၀မှာတော့ လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ အရင်မကျင်း ပနိုင်တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ ကျင်းပနိုင်မယ့်အခြေအနေအစရှိတာကိုတော့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဆေးဖြတ်ကျမ်းစာ သင်တန်းကို ဝင်စီးနင်းမှု ကချင်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ဒီတပတ်အတွင်း တွေ့ဆုံဖြေရှင်းမယ်
ဆေးဖြတ်ကျမ်းစာကျောင်းကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့မှုအပေါ် ကျောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်တို့ ဒီတပတ်အတွင်း တွေ့ဆုံကာဖြေရှင်းကြမယ်လို့ ကျောင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူလည်းဖြစ်၊ မော်ဖောင်း အသင်းတော်ရဲ့ သင်းအုပ်ဆရာ ဦးရှောင်လာက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
စက်တင်ဘာ နောက်ဆုံးအပတ်က ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ အောက်မော်ဖောင်းရွာက ခရစ်ယာန် မူးယစ်ဆေးဖြတ် ကျမ်းစာသင်တန်းကျောင်းထဲ စီးနင်းရှာဖွေခဲ့မှုအပေါ် ဖြေရှင်းပေးဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်စီကို စက်တင်ဘာ ၃၀မှာ စတင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
"ကျမ်းစာသင်ကျောင်းမှာ အဓ္ဓမဝင်စီးနင်းတာ အဲဒါကိုလူမှုကွန်ယက်တွေမှာ အမျိုးမျိုးဝေဖန်နေကြတယ်၊ ဘာသာရေးအရပုတ်ခတ်တာတွေမဖြစ်ဖို့နဲ့၊ ပြည်သူတွေအထင်မြင်မလွှဲမှားဖို့ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆို ထားတယ်" လို့ ဦးရှောင်လာကပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဝင်ရောက်စီးနင်းစဉ်အခါက စကားပြောစက်တွေတွေ့ရှိတာကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့အပေါ်လည်း ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကျောင်းဘက်က ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဖြတ်ကျမ်းစာသင်တန်းကျောင်းကို စီးနင်းမှု ဖြေရှင်းပေးဖို့ သမ္မတထံ စာပို့ပေမယ့် တုံ့ပြန်မှုမရသေး
ကျောင်းဘက်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရက တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တော့ အောက်တိုဘာ ၁၀ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံဖို့အတွက် သဘောတူထားပေမယ့် ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အချိန်အားလပ်မှုကို ဦးစားပေးကာ တွေ့ဆုံမှုကို ဒီတပတ်အတွင်းစီစဉ်ထားတာလို့ သူကပြောပါတယ်။
တွေ့ဆုံမှုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ မျှော်မှန်းထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ရင်လည်း ကျာင်းဘက်က ဘယ်လိုဘယ်ပုံဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်လည်း အောက်တိုဘာ ၈ရက်နေ့မနက်မှာ စည်းဝေးနေတယ်လို့ ဦးရှောင်လာကပြောပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဦးခက်အောင်က အောက်တိုဘာလ ၆ရက်နေ့မှာတော့ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား မြို့နယ်အတွင်း ကျင်းပတဲ့ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ စန္ဒီမယ်တော်ပူဇော်ပွဲကို တက်ရောက်ကာ အလှူငွေ ၁၀သိန်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအဖွဲ့အစည်း ၂၈ခုကို လတ်ရှိအချိန်မှာ စောင့်ကြည့်နေတာတွေရှိပြီး ဒီအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ဝါရှန်တန်ရဲ့ ထောက်ခံချက်ပါမှသာ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကိုဝယ်ယူခွင့် ပြုမယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
ဝိဂါလူမျိုးတွေအပေါ် အနိုင်ကျင့်မှုနဲ့ အဖွဲ့ ၃၀ လောက်ကို အမည်ပျက်စာရင်းသတ်မှတ်
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှင်ကျန်းဒေသက ဝိဂါလူမျိုးတွေအပေါ် အနိုင်ထက်ကျင့်မှုတွေမှာ ပါဝင်ပက်သက်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ တရုတ်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၃၀လောက်ကို အမည်ပျက်စာရင်းသတ်မှတ်တယ်လို့ အမေရိကန်က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အမေရိကန် ရဲ့အမည်ပျက် စာရင်းထဲမှာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေး ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ အခုလိုပိတ်ပင်တားမြစ်မှုတွေကိုတော့ တရုတ်ဘက်ကတုံ့ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။
အမေရိကန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဌာနကတော့ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေက ဝိဂါလူမျိုးတွေအပေါ် လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်တာ၊ အနိုင်ကျင့်မှုတွေမှာ ပါဝင်ပက်သက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ ဖြည့်စွက်ပြောကြားပါတယ်။
အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ တရုတ်က ဝိဝါလူမျိုးတွေကို သူတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့ စခန်းတွေ ထဲမှာ အကြိမ်ကြိမ် နှိပ်စက်တာတွေရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
တရုတ်ကတော့ အခုလို ဝိဂါလူမျိုးတွေကို စောင့်ရှောက်ထားရတာက အစွန်းရောက်မှုဖြစ်မလာဖို့ အတွက် ကာကွယ်တာလို့ ပြောထားပါတယ်။
ခါ့ တွေကို စစ်ဆင်မယ်ဆိုရင် တူရကီစီးပွားရေးကို ထိခိုက်မယ်လို့ အမေရိကန်သတိပေး
ခါ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေရှိရာနယ်မြေမှာ စစ်ဆင်ရေးလုပ်မယ့် တူရကီအနေနဲ့ စည်းလွတ်ဘောင် လွတ်လုပ်တာတွေရှိလာမယ်ဆိုရင် တူရကီစီးပွားရေးထိခိုက်မယ် လို့လည်း သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းက ခါ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့ လက်တွဲဖြုတ် ပြီး တပ်တွေပြန်ရုတ်တဲ့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခုခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
တူရကီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုလုပ်နိုင်မယ့် ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ် ထားပြီးပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
တူရကီဟာ ခါ့ဒ်တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တွေကို အကြမ်းဖက်သမားအဖြစ် မှတ်ယူထားတာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ကတော့ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့မှာ ခါ့ဒ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ကို ချေမှုန်းနေခဲ့တာပါ။
อัลบั้มภาพ ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲကို ဥပဒေအရသတ်မှတ်ချိန်မှာပဲ လုပ်မှာလို့ ကော်မရှင်အတည်ပြု အပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းများ